Home Wararka Joojinta Heshiiyadii Ilaalinayey Xuquuqda Shaqaalaha Somaliyeed ee Khaliijka ka shaqeysta waa Dembi.
Joojinta Heshiiyadii Ilaalinayey Xuquuqda Shaqaalaha Somaliyeed ee Khaliijka ka shaqeysta waa Dembi.
Iyadoo dhammaan ay ka dhinteen dowladda Xilgaarsiinta awoodaha distuuriga ah ee aan xaalado gaar ah oo degdeg ah ka ahayn ayaa waxaa weli socda ku takrifalka awoodaha xafiisyada dowladda sida Farmajo oo magacaabis safiirro iyo taliyayaal ciidan wada, kuwaas oo ay si isdabajoog ah uga soo baxayaan hay’ado badan. Ku tagrifalkaas awoodeed oo ay Khasab ku noqon doonto dowladda soo socota inay dib u saxdo ayaa hadda waxaa uu u socdaa si xawli ah waxaana sii wada dhammaan wasaaradaha Dowladda Xilgaarsiinta.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo shaqaale qabiileysan oo diblomasiyiin lagu sheegay caalamka u qeybineysa, ayaa waxaa barbar socda in wasaarad walba ay ka socdaan hawlaha ku tumashada shuruucda dalka oo agaasimayaal iyo shaqaale kale ayaa lakala badalayaa iyadoo latirtirayo heshiisyo iyo qandaraasyo horay loo galay si kuwa kale oo boodjebis ama sharuur laga sii qaatay la saxeexo, iyadoo la yiraahdo kuwii hore waa la joojiyey, waana waxa maanta ku dhacay Wasaaradda Shaqada oo leh waxaan joojinnay heshiiyadii shaqo siinta dadka Somaliyeed ee waddamada dibadda.
Heshiiskaas oo ah waa heshiis muhiim u ah shaqaalaha Somaliyeed ee dibadda u shaqa taga. Heshiisyada Noocan ah waxaa isticmaala dalalaka laga soo qaato shaqaalaha jaban sida Bakistaan, Masar, Itoobiya, Sudan, Idoneysiya iyo Filibiinins waana heshiisyada daryeela shaqaalahooda marka dalka ay joogaan ee ka shaqeystaan loogu gafo.
Heshiisyadaan inta badan waxaa lala galaa waddamada xoolaha leh oo shaqaale jaban u baahda sida waddamada khaliijka. Somaliya waa markii ugu horreysay ee ay awood u yeelatay inay heshiis xuquuqda xoogsatadeeda lagu dhowrayo ay la gasho waddamada Carabta gaar Sucudiga oo ay dad badan oo Somaliyeed oo Haween u badan ay ka shaqeystaan.
Heshiiskan wuxuu ilaalinayaa xuquuqda qofka shaqaalaha ajnabiga ee ka yimaada dal kale kana shaqeysta dal uusan u dhalan. Heshiiska Somaliya waxaa laga soo minguuriyey dalka Indoneysiya oo ay Sucuudiga ka joogaan 1 milyan Indosneysiyiin ah oo haween adeegayaal ah u badan iyadoo dalka Bakistaan ay ka joogaan Sucuudiga 2 Milyan oo shaqaale.
Guddoomiye ku xigeenka Barlamanka Cabdiweli Ibrahim Muudey oo ahaa wasiirka Shaqada ayaa garwadeenka ka ahaa heshiiska inkastoo la siyaasadeeyo haddana waa heshiis wax ku ool ah oo dhibaatooyin badan ka saaray haween badan oo lagu dacdarreyn jiray dalalka Carabta.
Heshiiska maanta la tirtiray waxaa la sheegayaa in NN ay rabaan inay ku xumeeyaan ama ay kula dagaalaan Cabdiweli Muudey oo beryahan afkiisa la maqmaqlayey aynu distuurka u noqonno. Heashiis waa heshiis wanaagasan waxayna MOL la xiriirtay ilaa 4 reer iyo 6 gabdhood oo ka fa’iidey heshiiska. Gabdhahaas waxay noo sheegeen inay markii uu Danjire Dahir Maxamuud Geelle heshiiskan dhaqangeliyey ay wax badan noloshooda iska badashay. Waxaa naloo soo celiyey ayey yiraahdeen dhammaan xuquuqdeena waxaana dib naloo siiyey lacago naga maqnaa iyo Baasabooraddeenna oo awal ay haysan jireen reerka aan u shaqeyno.
Haddaba tirtiridda Heshiiskan oo aan mid kale lagu badali Karin waqtigaan waayo awood sharci dajineed ma jirto maadaama uu waqtigii ka dhacay balrlamanka dalka. Waa dulmi iyo gabood fal loo geysanayo shaqaalaha Somaliyeed ee khaliijka ka shaqeysta gaar ahaa Sucuudiga haddii heshiiska laga noqdo, iyadoo Siyaasi hawlahiisa lagu xumeynayo.
Sidaas darted RW Rooble ha ka hortago waraaqdan siyaasadeysan ee gefka ku ah Dowladda Somaliya, laguna dhaawacayo nolosha dad masaakiin ah oo heshiiska ka fa’iiday, iyadoo la rabo in lagu gaaro dhibco siyaasadeed.